Usizi lwamaphoyisa kuthukuswa amaveni – Bayede News
Usizi lwamaphoyisa kuthukuswa amaveni
Esikhathini esiningi amaphoyisa avamise ukukhala ngokuntula
Posted on 29 November 2019 5 December 2019 by nguMenzi Jele
Esikhathini esiningi amaphoyisa avamise ukukhala ngokuntula izinsiza ekuqhubeni umsebenzi wawo uma kumele asize umphakathi, kodwa okwenzeka ekamu lamaphoyisa eMelmoth kwehlukile ngoba inqwaba yezimoto ezisetshenziselwa ukuhambela izindawo nezimo eziphuthumayo zishaqwe isikhonzi senkantolo.
Sekuyophela isonto lesibili amaphoyisa akuleli kamu esebenza ngaphansi kwengcindezi yokungabi nezimoto kulandela isigameko sokushaqwa kwazo yisikhonzi senkatolo. Lesi simo sidala ukuthi angakwazi ukufinyelela emphakathini uma ebizwa kunezimo eziphuthumayo. Awasakwazi ngisho nokuhambela ezinkantolo uma kudingeka eyofakaza amacaleni athile.
Umthombo ongaphakathi ocele ukungadalulwa upotshozele elaboHlanga ukuthi bahoshe umoya wokuthi izimoto zabo zokusebenza zishaqwe yisikhonzi senkantolo ngenhloso yokukhokhela amacala amademeshe afakwe ngabantu abamangalele uHulumeni ngenxa yamacala anzima enziwe ngozakwabo kulesi siteshi.
“Ezinye zalezimoto kuphoqeleke ukuba abaphathi bazishushumbise bayozithukusa ukuze zingashaqwa zonke. Nakuba siyakhuluma ukuthi sisele nezincane sibonga ubuhlakani obenziwe ngabaphathi abavele bathatha eziyingcosana bayozithukusa ndawana thizeni ngale kwalokho ngabe kuvalwe ngehlahla esiteshini. Phela isikhonzi senkantolo sibuye siphindelela sizoshaqa izimoto ngoba kuthiwa imali ayeneli edingakalayo,” kusho umthombo.
Uqhube wathi: “Maningi amacala amademeshe abhekene nozakwethu. Elinye lawo libamndakanya omunye umuntu okuthiwa washawa ngozakwethu befuna akhiphe isibhamu waze waquleka bazitshela ukuthi useshonile base bemyomthukusa emakhazeni kanti uzophaphama,”
Uqhube wathi: “Kumanje lomuntu uboshelwe elinye icala kodwa umangalele uHulumeni ngaleso sigameko. Sihoshe umoya othi uHulumeni uzihlangulile wathi akanayo leyo mali yokukhokhela lamacala amademeshe yingakho manje sekudliwa impahla.”
Okushiwo ngumthombo kuqinisekiswe nayizithombe zohhohhombe wezimoto zamaphoyisa ezithukuswe egcekeni lomuzi thizeni ukwenzela ukuba zingatholwa yisiskhonzi senkantolo.
Lesi siteshi sisiza izindawo eziningi zamakhosi ahlukene okubalwa kuzona indawo yeNkosi yakwaMpungose uSipho Mpungose ophesheya kweMfule,kube indawo yakwaSanguye ngaphansi kweNkosi esanda kukhothama uMshongozi Biyela, indawo yaeNtembeni ngaphansi kweNkosi uThandazani Zulu kanye nendawo yaSobuka ngaphansi kweNkosi uChakide Biyela.
Okunye ngalezi zindawo zijwayele ukukhungathwa yizimpi zemibango neyezigodi. Amanye amalungu omphakathi athi lesi simo esibhekene namaphoyisa aseMelmoth kufana nokuthi ashiywe dengwane.
“Isimo sizobheda kakhulu njengoba sekuyisikhathi sokujoja kwezinsizwa ezibuya eThekwini naseGoli njengoba kuvalelwa amaholidi kancibijane. Asazi sizovikelwa ngubani uma kwenzeka kubheduka izimpi ezijwayele ukusuka emidlalweni. Besicela uHulumeni ayisukumele lenkinga yokwentuleka kwezimoto zamaphoyisa kungakonakali,” kuzikhalela uMntwana uKhumbulani Zulu.
Naye uMntwana uZulu uke wabhekana nenkinga ngoLwesihlanu kumele athole usizo oluphuthumayo emaphoyiseni kade kumele atakulwe ehlathini laseBedlane abebhajwe kulona.
UZulu ubebhekene nenkinga yokuhlaselwa ngumuntu thizeni obethi umthela othulini ngenhlamvu ehlathini.
Kuthe kufanele ayothungathwa ngamaphoyisa kwatholakala ukuthi awakwazi ukuya khona ngenxa yokuthi iveni abeyisebenzisa ibingenawo amalambu okukhanyisa kanti nesimo sezulu besingesihle njengoba bekunezinkungu ebezivale umgwaqo.
Nakube kuyakhulunywa ukuthi uZulu ugcine etakuliwe ehlathini abebhace kulona ngemuva kokudutshulwa, kusize ukungenelela konogada bemeya kamasipala waseMthonjaneni. Onogada balekelele ngemoto yeMeya ukuphelezela iveni yamaphoyisa ukuwakhanyisela kwaze kwayofinyelelwa lapho obekubhace khona uZulu.
Umndeni nezihlobo zikaZulu bebekhathazekile njengoba amaphoyisa abesethe azolinda kuze kuse ebese eyomthungatha sekukhanya.
ElaboHlanga lithumele uhlu lwemibuzo ngoLwesithathu emnyangwnei wokhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal ngenhloso yokuthola izizathu zokushaqwa kwezimoto zamaphoyisa kuleli kamu nokuthi yini ezokwenziwa ukuwalekelela ngezinsiza zokusebenza.
Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engabuyile nezimpendulo naphezu kokuthi ebethembisile ukuthi azobuya nazo ngokukhulu ukushehsha.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu- Natal, uCaptain uNqobile Gwala ugcine ethe nabo basalindele abaphathi babo abakhulu kuzwelonke ukuba babathumelele izimpendulo ngenxa yokuthi uhlu lwemibuzo balwedlulisele kubona ngenxa yokuthi udaba lubucayi.
Posted in Izindaba, S-Four